Iindaba-Inzuzo yegridi yeciling
Inkqubo emiselweyo Luhlobo olutsha lwezinto zokwakha. Ngokuphuhliswa kolwakhiwo lwanamhlanje lwase China, isetyenziswe ngokubanzi kwiihotele, kwizakhiwo zesitalato, kwizikhululo zabahambi, kwizikhululo zeqonga, kwiindawo zemiboniso, kwiifektri, kwizakhiwo zeofisi, kwizakhiwo ezindala kulwakhiwo ngokutsha, ukuhonjiswa komgangatho wangaphakathi, indawo yokuhlala kunye nezinye iindawo. Isinyithi esikhanyayo (ipeyinti yokubhaka) isilinganisi se-keel inezibonelelo zesisindo sokukhanya, amandla aphezulu, ukulungelelanisa ukungahambeli kwamanzi, ukungcangcazela, uthuli, ukugquma kwesandi, ukufakwa kwesandi, ubushushu obungagungqiyo, njalo njalo. ixesha kunye nolwakhiwo olulula, njl. Umahluko phakathi kwe-keel yensimbi ekhanyayo kunye negridi yophahla iyindawo yokukhanya yentsimbi ayipendwanga, kwaye igridi yophahla idityanisiwe. Igridi ye-Ceiling eyahlulahlulwe yabamnyama nabamhlophe.
Ngokukhuselekileyo umlilo: I-keel yepeyinti yenziwa ngephepha lomlilo elinomlilo, elomeleleyo.
Isakhiwo esifanelekileyo: ulwakhiwo olubekwe kuqoqosho, indlela yonxibelelwano ekhethekileyo. Elula ukufaka nokugcina iindleko.
Imbonakalo entle: Umphezulu we-keel wenziwe ngeplate yentsimbi eyenziwe ngomthi, ephethwe ngepeyinti yokubhaka.
Uluhlu olubanzi lokusetyenziswa: ezifanelekileyo kwiivenkile ezinkulu, izakhiwo zeofisi, iihotele, iindawo zokutyela, iibhanki kunye neendawo zikawonke wonke.
1. Ngexesha lokwakhiwa kwesakhiwo, i-slabs esele zikho-in-sl okanye i-slabs esele yenziwe ziya kuthunjwa ngokweemfuno zoyilo, kwaye φ6 ~ φ10 ukuqiniswa kwesamente kwekhonkrithi kuya kungcwatywa. Ukuba uyilo aludingeki, ii-booms zentsimbi eziqinisiweyo ziya kufakwa ngaphakathi kwesimo sokucwangciswa kweezitshixo ezinkulu. Ngokwesiqhelo ingama-900 ~ 1200mm.
2. Xa ikholamu yodonga yegumbi elisekwe ngezitena, kufuneka igxunyekwe eludongeni kunye nekholamu kwindawo ephezulu yophahla. Izitena zokhuni eziphelelweyo ezifakweni ezinxamnye nomgangatho ziyakhiwa ngexesha lokwakhiwa. Isithuba phakathi kweendonga zi-900 ~ 1200mm. Ngaphezulu kwezitena ezimbini zokhuni.
3. Faka zonke iintlobo zemibhobho kunye nemibhobho yomoya kwisilingi ukufumanisa isikhundla sesibane, iindawo zokuhamba kunye nokuvuleleka okuhlukeneyo okucacileyo.
4. Zonke izixhobo ziyafumaneka.
5. Udonga nomsebenzi omanzi womgangatho womgangatho kufuneka ugqitywe ngaphambi kokuba kufakwe ipaneli yophahla.
6. Cwangcisa isherifu yesakhiwo sokwakha iqonga.
7. Phambi kokuba kwakhiwe indawo enkulu, kufuneka ithambo lesinyithi lisetyenziswe njengegumbi lemodeli, inqanaba lokubekwa kwephahla, ulwakhiwo lonyango lweendawo zokuhlala, ibhloksi kunye nendlela yokulungisa kufuneka ihlolwe kwaye ivunywe ngaphambi kokukhulu Ulwakhiwo
Ixesha lokuposa: Jul-14-2020